OoVimba boHlahlelo lobuGcisa-Funda ukuRhweba
tag: Uhlalutyo Technical
Annual Forecast for Monero Coin (2022)
In case the support level of $179 holds, bulls may take over the market and the price will increase towards the resistance levels of $220, $249 and $281. When the bears break down the support level of $179, there may be a decrease towards the support level of $161 and $136.
Monero is bearish on the weekly chart. Last year, the bullish trend commenced by the bull on January 04 at $136 support level. The bulls’ pressure broke up the resistance levels of $161 and $179 and placed the price at $511 level which is the high of the year. The sellers interrupted the price increase with the formation of bearish engulfing candles. The price decline to test the support level of $179. The just mentioned level happen to be the low of the year.
XMRUSD weekly chart, January 16
Monero price is trading below the 9 periods EMA and 21 periods EMA as a sign of bearish momentum. In case the support level of $179 holds, bulls may take over the market and the price will increase towards the resistance levels of $220, $249 and $281. When the bears break down the support level of $179, there may be a decrease towards the support level of $161 and $136. However, the relative strength index period 14 is at 50 levels with the signal line displaying bullish direction.
Monero is on the bullish movement on daily chart. The price action on the daily chart has formed a double bottom chart pattern. The first time price tested the support level at $179 was December 15. The price bounced up because the bearish pressure could not break it down. It tested the resistance level of $249. The bears opposed the price increase and push down the price to retest the previous low at $179 on January 08. The bulls may take over the market.
XMRUSD Daily chart, January 16
The price is trading above the 9-day EMA and the 21-day EMA which indicate a bullish reversal at $179 level. The relative strength index is at 40 levels pointing down to indicate sell signal which may be a pullback.
I-Uniswap (UNIUSD) Ixabiso linokuthi liqhubele kwiNqanaba leNkxaso ye-14 yeedola
Uqikelelo loNyaka lwe-Uniswap (2022)
Ingqekembe inokudiliza inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola ezibonelele ukuba abathengisi banyusa uxinzelelo lwabo kwaye baya kuncipha ukuya kunyaka ophelileyo ngoJanuwari ophantsi kwinqanaba le-6 yeedola. Kwimeko apho uxinzelelo lweebhere alukwazanga ukuphula inqanaba lenkxaso ye-$ 14, ixabiso linganyuka ukuya kwizinga le-$ 30 ukuba i-$ 18 kunye ne-$ 24 inqanaba lokumelana lingangenwa phezulu.
Amanqanaba okumelana: $ 18, $ 24, $ 30
Amanqanaba enkxaso: $ 14 $ 6, $ 1
Uniswap ibhere kwitshathi yeveki. Amandla e-bullish atyhalela ingqekembe kwizinga eliphezulu lokumelana ne-$ 43 kunyaka ophelileyo. Inqanaba elikhankanywe liphethe ingqekembe kwaye ixabiso alikwazanga ukunyuka ngakumbi. Iibhere ziqokelela umfutho ngakumbi kwaye kwaveliswa amakhandlela e-bearish evekini abonisa ukwanda koxinzelelo lweebhere. Ixabiso liye lavavanya inqanaba lenkxaso ye-114 yeedola kunyaka odlulileyo kwimarike ye-Uniswap.
Itshathi yeVeki ye-UNIUSD, nge-12 kaJanuwari
Uniswap uthengisa ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukunyuka kwesantya se-bearish. Umyinge ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) uwele umndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA) ezantsi. Ingqekembe inokudiliza inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola ezibonelele ukuba abathengisi banyusa uxinzelelo lwabo kwaye baya kuncipha ukuya kunyaka ophelileyo ngoJanuwari ophantsi kwinqanaba le-6 yeedola. Kwimeko apho uxinzelelo lweebhere alukwazanga ukuphula inqanaba lenkxaso ye-14 ye-$, ixabiso linganyuka ukuya kwizinga le-$ 30 ukuba i-$ 18 kunye ne-$ 24 inqanaba lokumelana lingangenwa phezulu. Nangona kunjalo, i-Relative Strength Index ikumanqanaba angama-40 ahambelanayo abonisa ukuba akukho mkhombandlela othile.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, u-Uniswap unebeare. I-crypto yakha iphethini yetshathi "M" ngoSeptemba kunyaka odlulileyo. Iphethini ye-bearish, ukuhla kwexabiso ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-14 yeedola. Le ngqekembe isephantsi kolawulo lweebhere. Inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola yavavanywa ngoDisemba, yakhupha umva ukuvavanya inqanaba lokumelana ne-$ 18. NgoJanuwari 09 inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola iphinda ihlolwe. Kukho umkhwa wexabiso lokutsibela ngasemantla.
U-Uniswap uthengisa kancinci ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla e-14 likumanqanaba angama-40 ukugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
Ixabiso leStellar: Ukwenziwa kwePhatheni yeTshati kaThathu eZantsi eZantsi, iiBulls zingalawula
Uqikelelo loNyaka lweStellar (2022)
Kwimeko yexabiso eliphantsi kwinqanaba lenkxaso ye-$ 0.24, inokuncipha ukuya kwi-$ 0.20 kunye ne-$ 0.16 yamanqanaba. Xa abathengi bekhusela inqanaba lenkxaso ye-$ 0.24, inokunyusa kwaye iphule kwi-$ 0.41 apho i-$ 0.50 kunye ne-$ 0.57 ingavavanywa.
Amanqanaba okumelana: $ 0.41, $ 0.50, $ 0.57, $ 0.78
Amanqanaba enkxaso: $ 0.24, $ 0.20, $ 0.16, $ 0.11
I-XLM/USD Ixesha elide iTrendi: Bullish Bias
I-Stellar ikwintshukumo ejikelezayo kwitshathi yeveki. I-crypto iqale kakuhle kunyaka ophelileyo ngokuthanda abathengi. Iqale intshukumo ye-bullish kwiveki yokuqala yalo nyaka uphelileyo ngokwenziwa kwekhandlela elomeleleyo nelikhulu. Ixabiso lenyuka kwaye livavanya izinga lokumelana ne-$ 0.7825 ngoMeyi; yayiyincopho yalo nyaka uphelileyo. Ikhandlela le-bearish eligubungela rhoqo ngeveki lenziwe njengomqondiso wokuba abathengisi babekho. Ixabiso livavanye umgangatho wenkxaso we-$ 0.24 ngoJulayi. Ukususela ngoko kude kube mzuzu, ixabiso liye laqala ngaphakathi kwe-$ 0.24 kunye ne-$ 0.41 amanqanaba kwitshati yeveki.
Itshathi yeVeki yeXLMUSD, nge-12 kaJanuwari
Kwitshathi yeveki, kubonakala ngathi amandla abathengisi alingana nabathengi kwaye yiyo loo nto imarike ifumana intshukumo eyahlukahlukeneyo. Kwimeko yexabiso eliphantsi kwinqanaba lenkxaso ye-$ 0.24, inokuncipha ukuya kwi-$ 0.20 kunye ne-$ 0.16 yamanqanaba. Xa abathengi bekhusela inqanaba lenkxaso ye-$ 0.24, inokunyusa kwaye iphule kwi-$ 0.41 apho i-$ 0.50 kunye ne-$ 0.57 ingavavanywa. Okwangoku, ixesha lesalathiso samandla e-14 lingaphezulu kwamanqanaba angama-40 abonisa isignali ye-bullish
I-Stellar i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Inqanaba lokumelana ne-$ 0.7825 lifike kunyaka odlulileyo. Abathengisi bachasa ukwanda okuthe kratya ngokusekwa kwamakhandlela e-bearish mihla le. Ixabiso linqabile kwaye livavanya inqanaba lenkxaso ye-$ 0.20 ngoJuni. Ixhumela kwinqanaba lokumelana ne-0.4169 yeedola kodwa ayikwazi ukuyiqhekeza. Ukususela ngoJuni wonyaka ophelileyo kude kube ngoku, ikwintshukumo ejikelezayo ngaphakathi kwe-0.4169 yeedola kunye ne-0.2497 yeedola.
Itshathi yosuku lwe-XLMUSD, nge-12 kaJanuwari
I-Stellar ithengisa malunga namaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ukutyhala ngakumbi ngeenkunzi zenkomo kunokuzisa ingqekembe ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-0.41 yeedola. I-Relative Strength Index amaxesha i-14 ihambela kumanqanaba e-50 kunye nomgca wesignali okhomba phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
tags Marketing, Uhlalutyo Technical, XLMUSD
I-US Wall Street 30 kwiNqanaba yokuBuyiselwa kwakhona, iNqanaba leThagethi le-38200
Iindawo eziManyeneyo eziPhambili35000, 35500, 36000
Imimandla yenkxaso ephambili27000, 26500, 26000
I-US Wall Street 30 (US30USD) yexesha elide iTrend: Bullish
I-US30USD ikwi-uptrend njengoko imivalo yexabiso ingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezijolise kwinqanaba le-38200. Kule veki idlulileyo, isalathisi sibuyele emva kokukhatywa kwinqanaba eliphezulu le-36800. I-US30USD iphinde yaqala ngokutsha i-uptrend emva kokuphindaphinda ngaphezu kwe-avareji yeentsuku ze-50 ezihambayo. Okwangoku, ngoDisemba 16 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa isalathisi siya kuphakama kwinqanaba le-2.0 ye-Fibonacci extension okanye inqanaba le-38258.60.
Izitalato zase-US Wall Street 30 Iimpawu zeTshathi yemihla ngemihla Ukufunda:
I-US30USD ikwinqanaba le-54 le-Relative Strength Index ixesha le-14. Isalathiso sikwindawo enyukayo kwaye iyakwazi ukunyuka ukuya phezulu. Imivalo yexabiso lesalathiso ingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okungaphezulu kwesalathisi. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka.
I-US Wall Street 30 (US30USD) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ze-4, i-US30USD ikwi-uptrend njengoko ixabiso liqhekeza ngaphezu kwe-21 yeentsuku ezihambayo ezihambayo. Okwangoku, ngoJanuwari 11 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa isalathisi siya kunyuka kwinqanaba le-1.618 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-36571.11.
I-US30USD ingaphezulu kwe-80% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-US Wall Street 30 iwele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. I-uptrend inokuthi ijongane nokumelana nokuphakama kwamva nje njengoko ixabiso lifikelela kwindawo ethengiwe kakhulu. Abathengisi banokuvela kwindawo ethengiwe kakhulu. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka.
I-US Wall Street 30 ikwi-uptrend njengoko ijolise kwinqanaba le-38200. Abathengi bazimisele ukuphula ukuchasana okuphezulu kwinqanaba le-36800. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba ukuchasana kwangoku kuphulwa.
tags Uhlalutyo Technical, Isitalato iUS Wall 30, I-US30USD
Ixabiso leCardano May Test July Low at $0.98
Uhlalutyo lwamaxabiso e-ADA-nge-11 kaJanuwari
Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-$ 1.11 ayibambanga, amanqanaba enkxaso ye-$ 0.98 kunye ne-$ 0.83 amanqanaba angavavanywa. Ngaba abathengi kufuneka bakhusele inqanaba lenkxaso ye-$ 1.11, ixabiso le-Cardano linokuthi lihlehlise kwaye libhekane namanqanaba okumelana ne-$ 1.30, i-$ 1.46 kunye ne-$ 1.64.
Amanqanaba okumelana: $ 1.30, $ 1.46, $ 1.64
Amanqanaba enkxaso: $ 1.11, $ 0.98, $ 0.83
I-Cardano i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Kwiveki ephelileyo, i-crypto yayithobela umyalelo wabathengisi. Emva kokubuyiselwa kwexabiso okwenzeka ngomhla we-23 kaDisemba kwinqanaba le-1.30 le-$ 1.60, uxinzelelo lweebhere luye lwanyuka. Uxinzelelo oluvela kubathengisi lunciphisa ixabiso ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-1.11 yeedola. Ixabiso okwangoku lijolise kwi-Julayi ephantsi kwinqanaba le-0.98 yeedola.
Itshathi yemihla ngemihla ye-ADAUSD, nge-11 kaJanuwari
Okwangoku irhweba ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ukuqhubeka ne-bearish trend. I-Cardano iye yawela ii-EMA ezimbini ezisezantsi zokuvavanya umgangatho wokuxhasa i-$ 1.11. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-$ 1.11 ayibambanga, amanqanaba enkxaso ye-$ 0.98 kunye ne-$ 0.83 amanqanaba angavavanywa. Ngaba abathengi kufuneka bakhusele inqanaba lenkxaso ye-$ 1.11, ixabiso le-Cardano linokuthi lihlehlise kwaye libhekane namanqanaba okumelana ne-$ 1.30, i-$ 1.46 kunye ne-$ 1.64. Isalathiso samandla ahambelanayo ixesha le-14 lingaphezulu kwamanqanaba angama-20 kunye nomgca wesignali okhomba phezulu obonisa uphawu lokuthenga.
I-Cardano ikwi-bearish movement kwi-chart yeeyure ze-4. I-crypto yayiyi-bearish kwiveki ephelileyo njengoko ixabiso liyancipha ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-1.11 yeedola. Iibhere zichase ukuhla kwexabiso kwinqanaba elikhankanyiweyo. Ixabiso le-Cardano lihlehliselwe umva ukuvavanya kwakhona inqanaba lokuchasana eliguqukayo. Uxinzelelo oluninzi oluvela kwiibhere lunciphisa ixabiso lokuvavanya kwakhona inqanaba lenkxaso okwesibini.
Itshathi ye-ADAUSD yeeyure ezi-4, nge-11 kaJanuwari
Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-40 kwaye umgca womqondiso usalatha ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
tags Cardano, Marketing, Uhlalutyo Technical
Ixabiso le-Bitcoin SV: Iinkunzi ziphazamisa iibhere kwiNqanaba le-105 yeedola, Ukunyuka kweXabiso kucingelwa
Uhlalutyo lwexabiso leBitcoin SV – nge-10 kaJanuwari
Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweebhere kuya kunciphisa ixabiso kwinqanaba lenkxaso ye-73 yeedola ezinokubonisa ixabiso kwi-$ 60 kunye ne-41 yexabiso lexabiso. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-73 yeedola libamba, ixabiso linganyuka ngokubhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 113, i-$ 148 kunye ne-$ 171.
Amanqanaba okumelana: $ 113, $ 148, $ 171
Amanqanaba enkxaso: $ 105, $ 73, $ 60
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV i-bearish. Kwiveki ephelileyo, ingqekembe yayikwintshukumo ejikelezayo kwitshathi yemihla ngemihla. Inqanaba langaphambili lenkxaso kwi-113 yeedola libambe kwaye i-bearish momentum ayikwanelanga ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwayo. Inqanaba lokumelana ne-$ 148 lihlala liqinile kwiinkunzi zeenkomo. Ngomhla we-06 kaJanuwari, iibhere zandisa umfutho wazo kwaye zityhala ixabiso elingaphantsi kwinqanaba lenkxaso ye-113 yeedola kwaye lijongene nenqanaba lenkxaso ye-$ 73.
Itshathi yeBitcoin SV yosuku, nge-10 kaJanuwari
Ezi EMA zimbini ziyagoba ukulandela umkhombandlela wexabiso. I-crypto iyaqhubeka nokurhweba ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukunyuka kwe-bearish. Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweebhere kuya kunciphisa ixabiso kwinqanaba lenkxaso ye-73 yeedola ezinokubonisa ixabiso kwi-$ 60 kunye ne-41 yexabiso lexabiso. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-73 yeedola libamba, ixabiso linganyuka ngokubhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 113, i-$ 148 kunye ne-$ 171.
I-Bitcoin SV ikwintshukumo ye-bearish kwimbono yexesha eliphakathi. Iibhere ekugqibeleni zilawula imarike yeBitcoin SV. Ukunyuka kweebhere ukunyuka kunye nokuhla kwexabiso ukudiliza inqanaba lenkxaso kwi-113 yeedola. Ixabiso liyancipha ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-73 yeedola.
I-Bitcoin SV itshathi yeeyure ezi-4, nge-10 kaJanuwari
Ixabiso lihamba malunga namaxesha angama-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba iinkunzi zenkomo zizama ukuphazamisa iibhere. Isalathiso samandla ahambelanayo ixesha le-14 likumanqanaba angama-50 angabonisi ulwalathiso oluthile.
tags Bitcoin SV, Marketing, Uhlalutyo Technical
← Entsha izithuba1 2 ... 216 abaDala izithuba →